Tag: Cambaareyn | Sagal Radio Services
Wasaaradda arrimaha dibbadda oo ka dalbaday Koonfur Afrika in muwaaddiniinta Soomaaliyeed la bad-baadiyo
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa u soo jeedisay dowladda Koonfur Afrika inay badbaadiso nafta iyo hantida dadka Soomaaliyeed ee dalkeeda ku sugan.
Dowladda Qadar oo cambaareysay weerarkii Axaddii ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 7, 2013
Dowladda Qadar, ayaa cambaareysay weerarkii Axaddii lagu qaaday kolonyo ay la socdeen samafalayaal Qadar u dhashay oo Muqdisho joogay, halkaas oo ay ku dhinteen tiro dad rayid ah.
Midowga Yurub oo cambaareeyay dilkii Raxmo Cabdiqaadir
Sagal Radio Services • News Report • March 28, 2013
Bayaan ka soo baxay af-hayenka Wakiilka Sare ee Midowga Yurub Katharine Ashton, ayaa lagu cambaareeyay dilka wariye Raxmo C/qaadir oo 24-kii bishan lagu dilay Muqdisho.
Raysal wasaare Saacid oo cambaareeyay qarax ka dhacay Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • February 12, 2013
Moqdisho, Feb, 11, 2013….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa si kulul u cambaareeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada Galkacyo kaas oo ay ku dhawacmeen ciidamo ka tirsan Booliska iyo dad Shacab ah.
QM oo cambaareysay dilka wariye Cabdi Xareed
Sagal Radio Services • News Report • January 19, 2013
Danjiraha QM ee Soomaaliya Augustine Mahiga, ayaa cambaareeyay dilkii loo geystay ALLAHA u raxmadee wariye Cabdi Xareed Cismaan Aaden, oo shalay Muqdisho lagu dilay.